မီးပြတိုက်: ခေါင်းဆောင်မှု အရည်အသွေး (၁၀) ချက်
Posted by Admin in ခေါင်းဆောင်မှု
၁။ သိလိုစိတ် ပြင်းပြမှု (Curiosity)
ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိလုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်မဲ့ အရာမှန်သမျှကို သိလိုစိတ် ပြင်းပြမှု ရှိတာကို ပြရမယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်း အ၀န်းအ၀ိုင်း အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ ဟုတ်ပါ့၊မှန်ပါ့ ပြောနေတဲ့ အုပ်စုရဲ့ အပြင်ဘက်က လူတွေ ပြောတာကို နားထောင်ရမယ်။ ကမ္ဘာကြီးက ကြီးမားပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ နေ၇ာတစ်ခု ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အကျိုး ရှိစေမယ့် စာအုပ် စာတမ်းတွေကို သိလိုစိတ် ပြင်းပြတဲ့စ်ိတ်နဲ့ ဖတ်ရမယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့အညွှန်းစာသားအရ Good leaders are good listeners လို့ ခေါ်ကြတယ်။ အကယ်၍ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အနေနဲ့ သူနေထိုင်နေရတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ နေရာရဲ့ပြင်ပကို မတူညီတဲ့ အတွေးတွေ နားထောင်နိုင်ဖို့ လျှောက်လှမ်း သွားလာပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် မရှိရင် လန်းလန်းဆန်းဆန်း မရှိဘဲ ကြီးထွားနေရတာနဲ့ တူနေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီ ခေါင်းဆောင်က လူအများရဲ့ ယုံကြည်မှု မရခဲ့ရင် သူလုပ်ဆောင်မှုတွေ မှန်တယ် ဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင် သိနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ဆိုတယ်။ လူတွေ ပြောတာကို နားထောင်နိုင်ဖို့ အရည်အချင်း မရှိတာက စိတ်ကြီးဝင်မှု ပုံစံတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ဒါက အရာရာ သူသိတယ် ဆိုတဲ့ အတ္တစိတ် (Ego)ကနေ စိတ်ကြီးဝင်မှု (Arrogance)ဖြစ်ပြီး ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်တော့တာမျိုး ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ နောက်ဆုံး ရောက်ရှိမဲ့ နေရာက ဆုံးရှုံးမှု (failure)ပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
A leader has to show CURIOSITY. He has to listen to people outside of the "Yes, sir" crowd in his inner circle. He has to read voraciously, because the world isabig, complicated place. George W. Bush brags about never readinganewspaper. "I just scan the headlines," he says. Am I hearing this right? He's the President of the United States and he never readsanewspaper? Thomas Jefferson once said, "Were it left to me to decide whether we should haveagovernment without newspapers, or newspapers withoutagovernment, I should not hesitate foramoment to prefer the latter." Bush disagrees. As long as he gets his daily hour in the gym, with Fox News piped through the sound system, he's ready to go. Ifaleader never steps outside his comfort zone to hear different ideas, he grows stale.
If he doesn't put his beliefs to the test, how does he know he's right? The inability to listen isaform of arrogance. It means either you think you already know it all, or you just don't care. Before the 2006 election, George Bush madeabig point of saying he didn't listen to the polls. Yeah, that's what they all say when the polls stink. But maybe he should have listened, because 70 percent of the people were saying he was on the wrong track. It tooka"thumping" on election day to wake him up, but even then you got the feeling he wasn't listening so much as he was calculating how to doabetter job of convincing everyone he was right.
၂။ ဆန်းသစ်မှု (Creativity)
ခေါင်းဆောင်က မိမိဒုံရင်း နေရာကနေထွက်ပြီး မတူညီဘဲ ကွဲပြားမှုတစ်ခုခု ဘာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကြိုးစားရှာဖွေလိုစိတ် ရှိရမှာဖြစ်တယ်။ မိမိနေရာ ပြင်ပကိုထွက်ပြီး တွေးတောမှုတွေ ရှိရမယ်။ ခေါင်းဆောင်မှု ဆိုတာက ပြောင်းလဲမှုကို စီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်လို့ သင်က ကုမ္ပဏီ တစ်ခုခုကို ဦးဆောင်နေရတာ ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ဦးဆောင်နေရတာ ဖြစ်စေ ပြောင်းလဲမှုတွေ အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်။ အရာရာက ပြောင်းလဲနေတာ ဖြစ်လို့ ဆန်းသစ်တဲ့ ရှာဖွေမှုတွေရှိရမယ်။ ရှိနေတဲ့ အခြေအနေ ကနေ ပြောင်းလဲမှု.နဲ.လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် (သို.) တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်။
၃။ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု (Communication)
ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မှု.တွေ အမြဲ ပြုလုပ်နေဖို. လိုအပ်တယ် ။ ပါးစပ်ကနေ ပြောနေရုံ သက်သက် မဟုတ်ဘဲ တကယ့် အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ပြီး အမှန်ပြောဆိုတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မှုကို အမှန်ပြောဆိုတာနဲ့ အစပြုရမယ်။ နာကြည်း ဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှ အမှန်ကို ပြောဆိုရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းဆောင်တွေက ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မှု ကောင်းတွေ (Leaders are good communicators) လို့လည်း ဆိုကြတာ ဖြစ်တယ်။
၄။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ (Character)
ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်က အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းသူ ဖြစ်ရမယ်။ အမှား၊ အမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီး မှန်တာကို လုပ်ရဲရမယ်။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တကို စမ်းသပ်ချင်ရင် သူ့ကို အာဏာပေးကြည့် လိုက်ပါလို့ အီဗရာဟင်လင်ကွန်းက ဆိုခဲ့တယ်။
၅။ သတ္တိရှိမှု (Courage)
ခေါင်းဆောင်မှာ သတ္တိရှိရမယ်၊ ကြောက်ရွံ့ နေသူတွေ အကြားမှာ ထောင်ထောင်ထောင်ထောင် သွားပြတာက သတ္တိရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ ကြမ်းကြမ်း တမ်းတမ်း ပြောတာကလည်း သတ္တိရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ သတ္တိရှိတယ် ဆိုတာက တွေ.ဆုံ ညှိုနှိုင်း စကားဝိုင်းမှာထိုင်ပြီး ကတိက၀တ် ထားရှိစကား ပြောဆိုနိုင်မှု ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။
၆။ လုပ်ချင် ကိုင်ချင် စိတ် ပြင်းပြမှု. (Conviction)
ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို. မိမိ ယုံကြည်ချက်အတိုင်း လုပ်ကိုင်လိုစိတ် စိတ်ဓါတ် ခွန်အား ရှိရပါမယ် ။ ပြင်းပြ ထက်သန်တဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု. လည်း ရှိဖို.လိုပါတယ် ။ လိုအပ်ရင် မိမိ အနားယူရမယ့် အချိန်မှာတောင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရပါမယ် ။
၇။ လူအများ၏ ချစ်ခင်လေးစားနိုင်မှု (Charisma)
လူအများရဲ့ ချစ်ခင်လေးစားနိုင်စေမှုက လူတွေကို သင့်နောက်ကနေ လိုက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေး ဖြစ်တယ်။ လူတွေကို စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိစေတဲ့ အရည်အချင်း ဖြစ်တယ်။ လူတွေက သူ့ကို ယုံကြည်တဲ့အတွက် သူ့နောက်ကနေ လိုက်ကြတာ ဖြစ်တယ်။
၈။ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှု (Competent)
ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်မှာ ကျွမ်းကျင် လိမ္မာမှုရှိရမယ်။ မိမိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်တာတွေ အားလုံးကို သိနေရမယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက သင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ ၀န်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ သူတွေကလည်း သူတို့ ဘာတွေ လုပ်နေတာလည်းဆိုတာ သိနေတဲ့ လူတွေ ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ခေါင်းဆောင်က ပြသာနာ ဖြေရှင်းနိုင်သူတစ်ဦး ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။
၉။ လက်တွေ့ကျကျ တွေးတောတတ်မှု (Common Sense)
အကယ်၍ သင့်မှာ လက်တွေ့ကျကျ တွေးတောတတ်မှု မရှိရင် ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ ခေါင်းဆောင်က ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိရမယ်။ ကြီးမားတဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ရမယ်။ ဆုတ်စရာရှိရင် ညင်ညင်သာသာ ဆုတ်တတ်ရမယ်။ လုပ်စရာရှိရင် မြန်မြန်ထက်ထက် လုပ်တတ်ရမယ်။ အကယ်၍ သင်က လူသားဆန်တဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ သင့်ရဲ့ ကြောင်းကျိုး ခိုင်လုံစေမှုနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ တွေးတတ်မှု လိုအပ်တယ်။
၁၀။ အကျဉ်းအကျပ်ထဲကနေ ဖောက်ထွက်နိုင်မှု (Crisis)
မည်သူမှ ခေါင်းဆောင်အနေနဲ. မွေးဖွားလာတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ဖန်တီး ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ ။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အကျဉ်းအကျပ် ကာလအတွင်းမှာ ပုံသွင်း ခံရသူနဲ့ လမ်းထွင်နိုင်သူ ဖြစ်တယ်။ ခုံပေါ်မှာ ခြေထောက်တင်ပြီး စာတွေ့တွေ ပြောရတာက လွယ်ကူပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ ဖြစ်လာတဲ့ အခက်အခဲတွေ ၊ အကျဉ်းအကျပ် ဖြစ်မှုတွေကနေ အောင်မြင်အောင် လမ်းထွင်နိုင်သူ ဖြစ်မှသာ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ကံတရား ထက် တကယ့် ဖြစ်ရပ်တွေ ပေါ် အခြေခံပြီး အခက် အခဲ ဒုက္ခတွေ.တိုင်း ပြည်သူတွေနဲ. ထပ်တူခံစား ၊ ပြည်သူတွေအတွက် စိတ်ချ လုံခြုံမှု.ကို ပေးစွမ်းနိုင်သူဖြစ်ရမယ် ။